यी चार कारण महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शा’रिरीक सु’खभो’ग मन पराउँदैनन ! - Samachar Post Dainik
यी चार कारण महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शा’रिरीक सु’खभो’ग मन पराउँदैनन !
शारिरीक सुखभो’ग एउटा यस्तो कुरा जुन सबैलाई आवश्यक हुन्छ तर कोही यसबारे कुरा गर्न आवश्यक ठान्दैनन् ।
आजको दिनमा यसका बारेमा समाजमा गलत धारणा विकास हुँदै गएको कारण यसको सकरात्मक भन्दा नकरात्मक असर धेरै देखा पर्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा विवाह भन्दा पहिले हुने सम्बन्धलाई सामान्य रुपमा लिने गरिएको छ ।
यी सम्बन्धहरु सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जानकारी भए पनि यसबारे धेरै जना व्यवहारिक भएको पाइदैन ।
असुरक्षित यौ न सम्बन्धले धेरै खालका प्रभाव पार्न सक्दछ । नचाहेको अवस्थामा पनि बच्चा बस्ने देखि विभिन्न रोगहरु सर्ने सम्मका समस्याहरु हुन सक्छन् ।
यसको निवारणका लागि धेरै उपायहरु पनि बजारमा आएका छन् ।
अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको साधन कण्ड’म हो । यसको प्रयोगले आरामदायक शारिरीक सुखभो’गमा लैजान सकिन्छ । तर पछिल्लो एक अध्यनले महिलाहरु कण्ड’म लगाएर गरेको भन्दा विना कण्ड’म गरिने सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिने गर्छन ।
यसका केही कारणहरु पनि रहेका छन् । आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
अमेरिकाको फ्लोरि’डाकी एक युवती आफ्नो विचि’त्रको सोखका कारण सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय बनेकी छिन् ।
२१ वर्षकी सेफ’रोन ड्रेविट बेर्लो नाम’की यी युवतीलाई स:पिङको यस्तो सोख छ कि उनी मिनेटमै लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छिन् । तर, आफ्नो बैंक खाता:मा रकम १ मिलियन डलर’भन्दा कम भयो भने उनी रुन्छिन् ।
सेफरोन बेलाय:तका पहिलो सम’लिंगी पिता’हरु बेरी र टोनी ड्रेविट बेर्लोकी छोरी हुन् । उनका पिताहरु अर्बपति छन् । बेरी र टोनी अहिले भने छुट्टइस’केका छन् । तर, पिता’हरु अर्बप’ति भएका कारण सेफरोनले पानीझैं पैसा बगाउँदै आएकी छिन् ।
द सनको रिपोर्ट अनुसार सेफरोनले डिजा’इनर सामान र सौन्द’र्यको लागि पैसा खर्च गर्छिन् ।
पिताबाट अति’रिक्त पैसा पाए:पछि सेफ’रोनले करि’ब १ लाख डलर सर्जरीमा खर्च गरिन् ।
आफ्नो बैंक ब्यालेन्स’का विषय’मा कुरा गर्दै उनले बैंकमा यति नै पैसा छ भनेर भन्न आफूलाई असहज लाग्ने बताइन् ।
उनका अनुसार उनको खातामा थुप्रै पैसा छ तर पैसा कम भयो भने उनी रुन्छि’न् । अहिले सेफरोन धेरै’जसो पैसा क्लव, मदिरा र विदा’मा खर्च गर्छिन् ।
प्रकाशित मिति २ श्रावण २०७८, शनिबार ११:४९